general business Jobs, Hiring, recruiting in general business Singapore | sg.jobs68.com
general business (28) Apply general business filter
We Are Looking For Service Sales Engineer Who Can Identify...
We are looking for Service Sales Engineer who can identify and develop new market opportunities in Myanmar. If you are interested send ...
ELV Manager (Fire Alarm, PABX,CCTV) (7-10 Lakhs) Experience - Foreign...
ELV Manager (Fire alarm, PABX,CCTV) (7-10 Lakhs) Experience - Foreign Experience Preferable English - Fluent Location - Kyimyindine Township JD The ...
B.Tech/B.E (Civil Or Architecture) များအတွက် အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းပါ။ Senior Drafter ဖြင့်...
B.Tech/B.E (Civil or Architecture) များအတွက် အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းပါ။ Senior Drafter ဖြင့် သီလဝါစက်မှုဇုန်တွင် လုပ်ကိုင်ရမည်။ အတွေ့အကြုံ (5) နှစ်နဲ့အထက် ရှိရမည်။ လစာ ၅ - ၈ သိန်းပေးထားပါသည်။ AutoCAD, Sketch Up, Revit, Photoshop သုံးတတ်ရမည်။ English Intermediate Level ဖြစ်ရမည်။ Senior Drafter (Architect, Civil) (...
I J S Recruitment Service မှ တဆင့်ဆက်သွယ်လျှောက်ထားပေးပါရန် # အလုပ်ရရှိပါက ၀န်ဆောင်ခ...
I J S Recruitment Service မှ တဆင့်ဆက်သွယ်လျှောက်ထားပေးပါရန် # အလုပ်ရရှိပါက ၀န်ဆောင်ခ ပေးရန်မလိုပါ # # Position : QC Engineer ( Male/Female -5Posts ) --------------------------------------------------------- - Location : Hlaing Tharyar Tsp - Job : Construction Company ...
Urgent Opportunity Project Engineer M (1 – Post) Salary –...
Urgent Opportunity Project Engineer M (1 – post) Salary – (5 – 10) Lakhs Company – Power & Energy Location – Yangon, Myanmar. Benefits – Saturday & Sunday Off. Ferry Provided. #...
တောင်/ဥက္ကလာပမြို့နယ်တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရမည်။ Site Engineer M/F -BE / B.Tech ( EP...
တောင်/ဥက္ကလာပမြို့နယ်တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရမည်။ Site Engineer M/F -BE / B.Tech ( EP , EC , MP )ဘွဲ့ရပြီးသူ -Age ( 30 ) Years Under -AutoCAD သုံးနိုင်၇မည်။ -Experience (3) Years -အလုပ်ချိန် မနက် ( ၉) နာရီ မှ ညနေ ( ၅ ) နာရီခွဲ -ပိတ်ရက် ( တနင်္ဂနွေ / အများပြည်သူရုံးပိတ်ရက် ) E-Mail : mynewjobscv1@gmail.com ...
#Senior Purchase Engineer (Male) - B.E (Civil) ဘွဲ့ရရှိသူဖြစ်ရမည်။ - Quantity...
#Senior Purchase Engineer (Male) - B.E (Civil) ဘွဲ့ရရှိသူဖြစ်ရမည်။ - Quantity Surveyor အတွေ့အကြုံရှိသူဖြစ်ရမည်။ - လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ (၃)နှစ် မှ (၅) နှစ် ရှိရမည်။ - English အရေး၊ အဖတ်၊ အပြော ကျွမ်းကျင်ရမည်။ - ခရီးသွားနိုင်ရမည်။ - လစာ (ညှိနှိုင်း) #Senior Purchase Engineer (Male) - B....
Foreign Experience ရှိတဲ့Electrical Manager အမြန်အလိုရှိပါတယ်။ ဂျပန်ပရောဂျက်တွေအဓိကလုပ်တဲ့ဂျပန် Company ဖြစ်ပါတယ်။ Salary: 7~10Lakh...
Foreign Experience ရှိတဲ့Electrical Manager အမြန်အလိုရှိပါတယ်။ ဂျပန်ပရောဂျက်တွေအဓိကလုပ်တဲ့ဂျပန် Company ဖြစ်ပါတယ်။ Salary: 7~10Lakh Location: Kyimindine Township * စီဗီဖောင်(ဓါတ်ပုံနှင့်တကွ) ကို Word သို့ PDF ဖိုင်ဖြင့် info@myanmarjoblink.com သို့ပေးပို့လျှောက်ထားနိုင်ပါတယ်။ * အမှတ်-၂၃/A, ရှမ်းကုန်းလမ်း ၊ မြေနီကုန်း၊ စမ်းချောင်း မြို့နယ် သို့လည်း… More လူကိုယ်တိုင်လာရောက် လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Electrical Manager (Fluent English) (...
Media And Advertising Co.,Ltd မှအောက်ပါဝန်ထမ်းများအလိုရှိသည် -Digital Marketing (2) Post -...
Media And Advertising Co.,Ltd မှအောက်ပါဝန်ထမ်းများအလိုရှိသည် -Digital Marketing (2) post - Contact Writter(2) post - 3D Designer (3) Post - Site Engineer(2) Post အမှတ်စဉ်အားလုံးအတွေ့ကြုံကောင်းများရှိရပါမည် ( အတွေ့ကြုံရှိသူများသာလျောက်ထားပါရန်) Mail - ...
Mandalay တွင် လုပ်ကိုင်ရန် Service Engineer တယောက် အမြန်အလိုရှိပါတယ်။ USD 250...
Mandalay တွင် လုပ်ကိုင်ရန် Service Engineer တယောက် အမြန်အလိုရှိပါတယ်။ USD 250 - 300 ကြားပေးထားပါတယ်။ - Bachelor Degree (သို့မဟုတ်) Diploma in Engineering ဖြစ်ရမည်။ - ယောင်္ကျားလေးဖြစ်ရမည်။ - Technical ပိုင်း အတွေ့အကြုံ (၂) နှစ် အနည်းဆုံးရှိရမည်။ - မန္တလေးတွင် လုပ်ကိုင်နိုင်ရမည်။ ***အောက်ပါ Link မှတဆင့် အလုပ်လျှောက်ထားနိုင်ပါတယ်။ 1.Service Engineer… More (For Mandalay) (Male) (...
Business: Garment Position: Production Control Language: Japanese N2 Location: Mayangone...
Business: Garment Position: Production Control Language: Japanese N2 Location: Mayangone working hours-8:00 AM to 5:00 PM Saturday- 8:00 AM to 3:00 PM working day- Monday ...
Job Vacancy ရန်ကုန်မြို့ရှိ Foundation လုပ်ငန်း ကုမ္ပဏီကြီးတွင်လုပ်ကိုင်ရန် Bored Pile အတွေ့အကြုံရှိပါက လျောက်ထားနိုင်ပါသည်။...
Job Vacancy ရန်ကုန်မြို့ရှိ Foundation လုပ်ငန်း ကုမ္ပဏီကြီးတွင်လုပ်ကိုင်ရန် Bored Pile အတွေ့အကြုံရှိပါက လျောက်ထားနိုင်ပါသည်။ မိမိအရည်အချင်းပေါ်မှုတည် ပြီး ကောင်းမွန်စွာညှိနှိုင်းနိုင်ပါသည် နည်းပညာအသစ်များ သင်ယူနိုင် ကောင်းမွန်သည့် အခွင့်အရေးတစ်ရပ်ဖြစ်ပါသည်။ ****လိုအပ်သည့်အချက်အလက်များ **** A.G.T.I (or) B.Tech (or) B.E (Civil) ဘွဲ့ရသူ ဖြစ်ရမည်။ BE… More မရရှိပါကလည်း A.G.T.I, ...
MyTel Is Seeking For One TECHNICAL MANAGER..... Technical Manager –...
MyTel is seeking for one TECHNICAL MANAGER..... Technical Manager – 1 ( Male ) - Must be Bachelor of Engineering - At least5years in Telecom ...
Marketing & Communication Assistant Manager Male Only Salary : 5...
Marketing & Communication Assistant Manager Male Only Salary :5to 8 lakhs Location : Yangon, Myanmar #Requirements - Bachelor of Any Degree (Prefer - Engineering ...
Japanese Well Known Company ကြီးတစ်ခုမှ Mandalayတွင်အလုပ်လုပ်ရန် Service Engineer (Consumer Electronics)...
Japanese Well Known Company ကြီးတစ်ခုမှ Mandalayတွင်အလုပ်လုပ်ရန် Service Engineer (Consumer Electronics) နဲ့အလုပ်ခေါ်နေပါတယ်။ Salary: USD 300, Location: Mandalay Interested candidate shall send cv with photo to info@...
စင်္ကာပူအခြေစိုက် Justlogin ကုမ္ပဏီ ၏ အွန်လိုင်းHR applications (payroll, leave, time and attendance) experience များအတွက် ရန်ကုန်၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်ရှိJustlogin ကုမ္ပဏီရုံးခွဲတွင် ခန့်ထားရန် အောက်ပါရာထူးများ… More လစ်လပ်လျက်ရှိပါသည်။ ဝန်ဆောင်ခ ပေးရန်မလိုပါ။ ၁။ Android developer - (Bachelor’s degree in IT/ Computer Science ဘွဲ့ ရရှိထားပြီး အတွေ့အကြုံအနည်းဆုံး ၂နှစ်ရှိရပါမည်)။ ၂။ iOS ...
သီလဝါတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် Site Engineer လိုအပ်လျှက်ရှိနေပါသည်။ စိတ်ဝင်စားသူများအောက်ပါ Email တွင် လျှောက်ထားနိုင်သည်။ Eainchitthuconstruction.hr@gmail.com...
သီလဝါတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် site engineer လိုအပ်လျှက်ရှိနေပါသည်။ စိတ်ဝင်စားသူများအောက်ပါ email တွင် လျှောက်ထားနိုင်သည်။ eainchitthuconstruction.hr@gmail.com ။ အတွေ့အကြုံ၃နှစ်အထက်လျှောက်ထားနိုင်သည်။
သီလဝါစက်မှုဇုန် Production & Manufacturing ပိုင်းများတွင် လုပ်ကိုင်ရန် EP/EC/MP ဘွဲ့ရ Engineer များ...
သီလဝါစက်မှုဇုန် Production & Manufacturing ပိုင်းများတွင် လုပ်ကိုင်ရန် EP/EC/MP ဘွဲ့ရ Engineer များ အမြန် လိုအပ်နေပါတယ်။ လစာကောင်းတာမို့ ကိုက်ညီရင် အခုပဲ လျှောက်ထားနိုင်ပါတယ်။ - EC, EP, MP ဘွဲ့ရများ ဖြစ်ရမည်။ -… More Maintenance & Service အတွေ့အကြုံ ရှိရမည်။ - English စာ ရ ရမည်။ **အောက်ပါ Link များမှတဆင့် အလုပ်လျှောက်ထားနိုင်ပါတယ်။ 1.Electrical Engineer (CCTV,...
စင်္ကာပူရုံးခွဲဖြစ်သော Facility Link Contracts (Interior Design,Project Management,Interior Fit Out) Co.,...
စင်္ကာပူရုံးခွဲဖြစ်သော Facility Link Contracts (Interior design,Project Management,Interior Fit Out) Co., Ltd.မှ 1) Quantity Surveyor (Interior) ရာထူး (ကျား/မ)-(1) ဦး အလိုရှိပါသည်။ အတွေ့အကြုံအနည်းဆုံး ၅နှစ်အထက်ရှိရမည်။ စိတ်ပါဝင်စားလျှင် CVကို အောက်ပါအတိုင်းပေးပို့ နိုင်ပါသည်။ Email - myint.aye@facilitylink....
မန္တလေးတိုင်း၊ ကျောက်ဆည်မြို့နယ်ရှိ စီမံကိန်း Project Site တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်အတွက် ဝန်ထမ်းအလိုရှိပါသည်။ Document Controller...
မန္တလေးတိုင်း၊ ကျောက်ဆည်မြို့နယ်ရှိ စီမံကိန်း Project Site တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်အတွက် ဝန်ထမ်းအလိုရှိပါသည်။ Document Controller (Male prefer) - 1 post Salary :7to 10 lakhs (Depends on Experiences) Requirement - Bachelor of engineering (EP, MP) -5...